माक्स लगाउनुहोस्, कोरोना लगिहाले पनि सिकिस्त बिरामी हुने संभावना कम हुन्छ – Mission Khabar
माक्स लगाउनुहोस्, कोरोना लगिहाले पनि सिकिस्त बिरामी हुने संभावना कम हुन्छ
मिसन खबर २२ कार्तिक २०७७, शनिबार १२:५०
भाइरसको मात्रा र समयसँग जोडिएको एउटा अर्को पाटो पनि छ। मानिसको शरीरमा जति भाइरस छन्, ती सबै एकैपटक ह्वार्र प्रवेश गरेका हुन सक्छन् वा केही समय लगाएर छिरेको पनि हुन सक्छ।
अमेरिकाको रोग नियन्त्रण तथा निवारण निकायले ‘क्लोज कन्ट्याक्ट’ (नजिकको सम्पर्क) लाई अर्थ्याउन आफैंले दिएको बयान परिवर्तन गरेको थियो। उसले भनेको थियो- कुनै पनि संक्रमितको नजिक १५ मिनेटसम्म थोरैथोरै अवधिका थुप्रै भेट हुनु पनि ‘क्लोज कन्ट्याक्ट’ हो। यसअघि उक्त निकायले कुनै पनि संक्रमितसँग १५ मिनेटसम्म लगातार बसिरहनुलाई ‘क्लोज कन्ट्याक्ट’ भनेको थियो।
सम्भावित संक्रमितको स्वास्थ्य अवस्था र उसका स्वास्थ्यसँग जोडिएका बानी वा लतले यसलाई प्रभाव पार्छ। जस्तो धूमपान गर्छ-गर्दैन, स्वस्थ्यकर खानपिनमा ध्यान कत्तिको दिन्छ, शारीरिक गतिविधिका हिसाबले कत्तिको सक्रिय छ। राती मजाले सुत्छ कि सुत्दैन?
तर, यदाकदा जवान र स्वस्थ देखिने मानिस पनि त मृत्युकै मुखमा परिरहेका छन् नि! हो, त्यस्तै एउटा उदाहरण डा. ली वेनलिङको हो। उनी चीन, वुहानका चिकित्सक थिए, तन्नेरी थिए र स्वस्थ पनि थिए। तै पनि कोरोनाका कारण मृत्यु वरण गरे।
डा. गान्धीका अनुसार उनीहरू त्यो मात्रा पत्ता लगाउने कामतर्फ लागेका पनि छैनन्। ‘जनावरमा गरिएको परीक्षणका आधारमा भने जति धेरै भाइरस हाल्यो त्यति बढी संक्रमित भएको देखिइसकेको छ,’ उनी भन्छिन्, ‘त्यसैका आधारमा हामी मानवमा पनि यो कुरा मिल्छ भनेर अनुमानसम्म लगाउन सक्छौं। तर, मानवमा यो मात्राबारे बुझ्न त कसरी सकिएला? त्यो मिल्दैन।’
कुनै पनि संक्रमित व्यक्तिले आफ्नो शरीरमा बोकेको भाइरसको भार हो भाइरल लोड। केही अध्ययनले देखाए अनुसार संक्रमित जति ग्रस्त बिरामी भयो उसमा भाइरल लोड त्यत्तिकै बढी देखिएको छ।
गान्धी त्यस्तो अवस्था कुनै पनि हालतमा आउन दिन चाहँदिनन्। बरू उनी अहिलेसम्म जनस्वास्थ्य विद्हरूले भन्दै आएका कुरामै जोड दिँदै हामीले सक्दो आफूलाई सुरक्षित राख्नु उपयुक्त हुने बताउँछिन्। घरायसी मानिसभन्दा बाहिरकासँग सक्दो भौतिक दुरी कायम राखौं, हल वा बन्द कोठाभन्दा हावा चल्ने र घाम लाग्ने खुला स्थानलाई महत्व दिऊँ, आहारविहारमा यथेष्ट ध्यान पुर्‍याऊँ। सबैभन्दा महत्वपूर्ण, मास्क लगाउन चाहिँ नछाडौं।